Mizaka ny Vokatry Ny Fandaniana Tafahoatra Nataon’ny Governemanta Teo Aloha i Sri Lanka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Oktobra 2016 5:16 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Magyar, Español, Swahili, Ελληνικά, русский, Français, English
Zotram-piaramanidina SriLankey – Airbus A330-243, 4R-ALG niantsona tao Heathrow Londra. Sary tao amin'ny Flickr avy amin'i Michael Garnett. CC BY-NC 2.0
Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Groundviews, tranonkala famoaham-baovao an'olon-tsotra efa nahazo loka ao Sri Lanka. Navoaka eto ny dika nasiam-panovana noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nanambara i Sri Lanka vao haingana fa handoa volabe USD 170 tapitrisa (25 miliara Rs) ho an'ny orinasa mpampanofa fiaramanidina AerCap Holdings izy hanafoanana ny fividianana fiaramanidina Airbus A350 efatra, izay efa novidian'ny governemanta Rajapaska taloha tamin'ny 2013.
Ao anatin'ilay antsoin'ny manampahefana hoe fanavaozan-drafitra, nanapa-kevitra hanatsahatra ny teti-bolan'ny zotram-piaramanidina Mihin Lanka ihany koa i Sri Lanka.
Bokan-trosa nandritra ny taona maro ny SriLankan Airlines. Ny fotoana farany nahazoan'ny orinasa tombony dia voalaza fa tamin'ny taona 2009, herintaona taorian'ny nivarotan'ny Emirates ny anjara birikiny tao amin'ity orinasam-panjakana ity. Nitatitra ny orinasa farany teo fa matiantoka 16,33 miliara ropia (112 tapitrisa USD) izy tao anatin'ny herintaona.
Namorona sary torohay mampiseho izay mety azon'ny governemanta vatsiana vola amin'ny vola lany amin'ny fanafoanana ny fividianana fiaramanidina efatra ny Groundviews.
Nalaina tany amin'ny Ministeran'ny Fitantanam-bola tamin'ny tatitra isan-taona 2015 ny tarehimarika.
Sary avy amin'ny Groundviews. 1 LKR = 0.00683338 USD
Volabe tsy toko tsy forohana ny Rs. 25 miliara, nahatonga fahatezerana tao amin'ny media sosialy ny fanambaràna:
#lka #FlyingFolly nanafoana ireo fiaramanidina efatra A350 ny @flysrilankan, niharan'ny sazy USD98m (LKR 14b). Mandoa volabe 4 MR isika!
Araka ny asehon'ny sary torohay, ny vola nampiasaina hanafoanana ny fanafarana ireo Airbus dia azo ampiasaina handoavana fisotroan-dronono, fandoavam-bola Samurdhi (fiahiana ara-tsosialy), fanafody, na fitaovam-pianarana. Sahirana tamin'ny trosa nandritra ny taona maro ny SriLankan Airlines (nampitandrina ny fahalemen'ny fahavelomany manomboka ny 2009 ireo mpanamarina kaonty), kanefa mbola nanohy nividy fiaramanidina ihany ny governemanta, nampitombo ny fatiantoka efa niaretana.
Ankehitriny, tsy maintsy mizaka ny vokany i Sri Lanka – tafakatra dolara an-tapitrisany izany.